I-Issuu: Isixhobo sokuThengisa, hayi iiMagazini nje | Martech Zone
NgoLwesithathu, Aprili 25, 2012 NgoLwesine, Aprili 26, 2012 UJanneane Blevins
Isu ihlala inxulunyaniswa ne Umzi mveliso we-intanethi okhulayo kwi-Intanethi, ukwanda ngokukhawuleza iimagazini zefashoni, kunye namanye amaqela anomdla. Kodwa u-Issuu, kunye nokwenza lula ukwenza iincwadi ze-PDF, kunokuba sisixhobo sokuthengisa kunye nesixhobo sophuhliso lweshishini ngokunjalo. Kwi KA + A, njengoko siqhubeka nokwandisa abathengi bethu, u-Issuu uye waba ngumjelo wokwabelana ngomsebenzi wethu nabantu kwilizwe liphela.
Iqale ngencwadi yesikhundla esibe siyile sayiprinta kwiibhetshi ezincinci sisebenzisa acatshulweyo (Esinye isixhobo esikhulu). Siwathandile amava okuntywiliselwa kwincwadi-ubunzima bayo busezandleni zakho, amaphepha agudileyo e-matte, kunye nokubrawuza ekuzonwabiseni kwakho. Njengoko saqala ukushicilela, sabelana kunye neFedEx'ing ezi ncwadi kwilizwe liphela, saqonda ukuba sidinga enye indlela yokwabelana ngomxholo wethu. Isicwangciso esicocekileyo sokuprinta silinganiselwe, nokuba kungabiza ngendleko, ukuba lula kohlaziyo, okanye ixesha lokuhambisa. Sifuna indlela yokuhambisa amava encwadi, kwimfuno.
Isisombululo sethu sisifumene ku-Issuu, iqonga losasazo lwedijithali elisenze ukuba sabelane ngomsebenzi wethu nabaphulaphuli abaninzi kwaye sisahambisa amava amahle. U-Issuu ugcina ezinye zeempawu ezithandekayo kwincwadi ebonakalayo (egxile kwaye ekhangeleka) kwaye ayigcwalise ngamandla eqonga le-Intanethi (ekwabelwana ngokukhawuleza, ekuhlaziyeni ngokulula nangexabiso eliphantsi). Ababhenkethi banokwenza ubhontsi ngohlobo olupheleleyo lwefayile ye- incwadi yethu kwi-intanethi (jonga ngezantsi!), Kwaye wabelane ngamaphepha (okanye upapasho luphela) kunye nabahlobo babo kunye noogxa. Ngelixa sivuma, kunzima ukutshintsha ikopi yencwadi ebusuku, kuba uninzi lweziganeko, u-Issuu usebenza ngokukuko kwaye ufikelela kubanzi- yiyo loo nto esenza ukuba sisebenzise isixhobo.
Vula upapasho -Simahla ukupapasha - Uphawu olungakumbi
tags: Uphuhliso lwamashishiniUkuThengiswa kweMpahlayedijithaliikhutshweurhweboPublishing
UJanneane uyiProjekthi kunye noMphathi woLuntu kunye neqela elimangalisayo e KA + A, apho bayila iimveliso kunye namava kwiinkampani zobuchwephesha bokukhula okuphezulu. Ukwangumseki-mbumba IndySpectator, Isikhokelo seeleta kwiindlela ezintsha zokuthanda u-Indy, kunye nodade wabo webhlog, Umbonisi wokuqalisa, ezinikezelwe kwindawo yokuqalisa yendawo. Kutshanje uJanneane ebesebenzela ukukhulisa indawo yaseIndy yefashoni yendawo Njengomzekelo, ukuhlangana simahla kwenyanga kwabantu abanomdla kwifashoni.
Epreli 26, 2012 ngo-12: 00 AM
Bendithetha nje nomxhasi namhlanje kwaye ndabelana ngale post, Janneane. Baprinta iitoni zeencwadana ezikumgangatho ophezulu kakhulu kwimigca yemveliso yabo. Oku kuya kuba yindlela efanelekileyo yokwabelana ngezo ncwadana ngedijithali kunye nabaphulaphuli babo. Enkosi ngesi sithuba – ubuchwephesha obubalaseleyo ngenene kwaye ndiyayithanda incwadana ka-KA+A… Ndijonge phambili kumhla endinokuthi ndisebenze neqela lakho ukulungisa kakuhle iibrendi zethu!